I-Auto Compact Sit-On Creeper - Bambelela Ku-330lbs!
Ikhaya / Imikhiqizo / I-Sit-On Creeper
I-Rolling Imininingwane Yomgwaqo
Isihlalo esihlelayo esinepulatifomu enkulu yokuhlala, islayidi samathuluzi okudonsa nodonsa. Uzobusa igalaji kanye nokuhamba ngemoto kule nqola yomgcini we-rolling. Kwenziwe ngopulasitiki okuhlala isikhathi eside, amasondo ahamba kahle ku-driveway nakukhonkolo ngokufana.Itha zonke izinhlobo zokusebenzisa kubandakanya imininingwane yezemoto noma umsebenzi wokusebenza.
Oll Roll indlela yakho ngokusebenzisa imininingwane.
Ays Ama-tray amathathu ahlukene wenhlangano.
♣ Ibamba kuze kufike ku-330lbs!
♣ I-polyurethane ehlala isikhathi eside kuhlaka lwensimbi
Pretty Yinhle iqinile, kulula ukuyihlanganisa, ikhululekile ukuhlala kuyo.
Ijubane futhi Kufinyelela Ukuthola Umsebenzi
Lesi sikhwama se-compact sokuhlala sithandwa siyintandokazi yekhasimende kusukela sikwenze iminyaka embalwa,
futhi akukho kungabaza okuhlobene nokuphakama kwayo okuhle, ukulingana okulingene.
kanye nokwakhiwa osezingeni eliphakeme. Lona Ithuluzi elihle lakho konke phansi okulahla phansi futhi kungcolile
kanye nemisebenzi yokulungisa. Ungahlangana egalaji noma ku-driveway yakho.
Umzimba wenqola ka-Imininingwane
sekwanele ukuthi uchithe amahora angama-2-3 ucwebezela u-waxing. Upulasitiki ulinganiswe ngumuntu oqinile ngokumangalisayo
ifreyimu yensimbi ne-esindayo-duty ama-intshi amane Roll VERY WELL zombili egalaji nge floor edwetshwe kodwa
Naphezu kokhonkolo ngaphandle kokhonkolo kubalulekile. Amabili amasondo amane ayakhiyeka, kanjalo nokuwagcina
wena endaweni lapho usuthole indawo yakho emnandi.
Ithuluzi elinobuhlakani elinobude obugcwele bokukhipha ikhabethe namathileyi amabili akhishwayo, amahle futhi avula kalula noma acishe,
Umhlangano bekuyisiqeshana sekhekhe futhi uyamesaba amaphrojekthi omhlangano.
Lo mshini wokufaka imininingwane yemoto futhi unezici ezithile zokugcina ezinobuhlakani. Kufika esitokisini ngamathiyisi amabili okufakwa kuwo
noma ngabe ukuphela kwe-creeper, okwenzelwe ama-fasteners namanye amathuluzi amancane, kufaka phakathi abanikazi bamabhodlela abangabamba zethu
Amabhodlela ama-8 noma amabhodlela ali-16. Ikhabethe lokugcina lokuhlela okuhlinzekwa ngemininingwane njengamabhulashi, amathawula namaphampu,
uhlala enkabeni ye-creeper. Ungase futhi wenze ngokwezifiso i-creeper yakho ngokungeza umthamo wokugcina ongeziwe nenduduzo.
Ihlala ekuphakameni okuphelele ukuze ifinyelele emasondweni zombili izingxenye eziphakeme nezingezansi ngaphandle komzamo omkhulu, ikakhulukazi
abangaphezulu. Kuhle ukusebenzisa izinguquko ezenziwe ngamabhuleki, ukufakwa kwamaphepha emotweni noma ukusebenza endlini edinga ephansi
umsebenzi wendawo endaweni yokuguqa ngamadolo, Inkululeko enhle yokuhamba ngamasondo amakhulu.
Ufuna ukuyibhuka? Sihlala njalo lapha uma unentshisekelo
I-SIT-ON CREEPER, I-Rolling Imininingwane ye-Riler, Isihlalo se-Creeper / Ithuluzi
Umkhiqizo we-Spec. Imodeli Encane / Eyisisekelo Ephakathi
Umkhiqizo Usayizi 375x360x260mm / 455x320x255mm
emasakeni I-1 PC Creeper igcwele e-master carton eyodwa
MOQ 400 Imisa
Usuku lokuthumela Amaviki angama-3-4.
Sicela uqinisekise ukuthi ungumuntu ngomuntu Plane.